हिमाल खबरपत्रिका | नेपाली टेक मास्टर्स
नेपाली टेक मास्टर्स
पाँच विद्यार्थीले थालेको एक्सप्लोर ग्याजेट मुलुकको एकमात्र भेरिफाइड टेक च्यानल हो।
विनोद गौतम, आयुष विष्ट, प्रभात यादव, सोहिल श्रेष्ठ, सफल अधिकारी र सम्मान विष्ष्ट।
आइफोन–७ का विशेषता के के छन्? बजारमा कस्ता कस्ता मोबाइल एक्सेसरिज भित्रिंदैछन्? कुन प्रयोजनका लागि कस्ता ग्याजेट छान्ने?
प्रभात यादव, सम्मान विष्ट, सफल अधिकारी, सोहिल श्रेष्ठ र आयुश विष्ट अहिलेको पुस्ताले व्यग्रतापूर्वक खोज्ने यस्ता जिज्ञासाको तात्तातो उत्तर पस्किरहेका छन्। यूट्यूब च्यानल एक्सप्लोर ग्याजेट मार्फत यी युवा विश्वबजारमा सार्वजनिक नयाँ पुराना प्रविधिको चर्चा र विश्लेषण गर्छन्। सूचनाप्रविधिमा चाख राख्ने डेढ लाखले यतिवेला यो च्यानल पछ्याइरहेका छन्।
जुलाई २०१२ बाट सञ्चालनमा आएको एक्सप्लोर ग्याजेट नेपालकै एकमात्र भेरिफाइड टेक च्यानल हो। यो च्यानलले २०१४ मा गुगलको 'सिल्भर प्ले वटन' अवार्ड पनि पाइसकेको छ। एक लाख सब्सक्राइव, पृथक् एवं वैधानिक सामग्री पस्कने च्यानलले मात्र यस्तो अवार्ड प्राप्त गर्छ।
यति मात्र होइन, किङस्टोन, लजिटेक, सेनाइजर जस्ता आधा दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डले बजार प्रवर्द्धनका लागि एक्सप्लोर ग्याजेट सँग साझेदारी गरिरहेका छन्। त्यसबाहेक गुगल एडसेन्सबाट आउने पैसा त छँदैछ। “थुप्रै कम्पनीले कुनै पनि ग्याजेट, एक्सेसरिज उत्पादन बजार पठाउनुअघि नै हामीलाई उपलब्ध गराउँछन्”, प्रभात भन्छन्, “अनि हामी त्यसको राम्रो, नराम्रो पक्ष समेटेर यूट्यूबमा भिडियो अपलोड गर्छौ ।” उनी अहिलेसम्म पाँच सयभन्दा बढी भिडियो यूट्यूब च्यानलमा अपलोड गरिसकेको बताउँछन्।
त्यसो त उनीहरू फेसबूकमा समेत उपलब्ध छन्। छुट्टै फेसबूक पेजमार्फत जिज्ञासा शान्त पार्न प्रयास गर्छन्। “नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीबारे थुप्रै प्रश्न आउँछन्, हामी छिटो र सजिलो तरीकाले जानेको कुरा बताउँछौं”, सम्मान भन्छन्।
फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित प्रविधि मेला 'भिभा टेक्नोलोजी' को निम्तो मानेर भर्खरै फर्किएका उनीहरूले अबको पाँच वर्षभित्र प्रविधिमा आउने परिवर्तनबारे पनि यूट्यूबमा 'फिचर' गरेका छन्। “भिभा मेलामा अचम्मै लाग्ने प्रविधिहरु प्रदर्शन गरिएको थियो”, प्रभात भन्छन्, “पाँचवटा प्रविधिको फिचर गरेका छौं।”
तीमध्ये प्लेस्टेशन भीआर, थ्रीडी स्क्यानर, मानवीय प्रवृत्तिका रोबोट, ड्रोन र सिमुलेसन गेमका श्रव्यदृश्य सामग्री धेरैले रुचाएका छन्। यो टोली अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा हुनलागेको प्रविधि मेला 'गेट नाइस' मा सहभागी हुने तयारी गरिरहेको छ।
यूट्यूबमा श्रव्यदृश्य सामग्री राख्ने होडसँगै पछिल्लो समय उनीहरूले त्यस्ता सामग्री निर्माणको सस्तो र गुणस्तरीय प्रविधिबारे जानकारी पनि पस्किन थालेका छन्। त्यस्तै, नयाँ नयाँ गेमिङ डिभाइस, गेमिङ एप्स र खेल्ने तरीकाबारे सामग्री पनि राखिरहेका छन्।
'यूट्यूबमा सबैभन्दा बढी के खोजिन्छ, त्यही कुरा किन नदिने?' अहिले लिटिल एञ्जल्स कलेजका बीबीएका विद्यार्थी प्रभातलाई चार वर्षअघि यस्तो सोच फुर्‍यो। त्यसपछि उनले 'हाउ टु रुट ग्यालेक्सी एस' भन्ने भिडियो बनाए र यूट्यूबमा अपलोड गरे। यो भिडियो एक महीनामै १० हजारले हेरे। प्रभात उत्साहित भए। तर, यो भिडियोले सम्पूर्ण नियम पालना नगरेको थाहा पाएपछि उनले त्यो भिडियो हटाए। र, साथीहरुसँग मिलेर एक्सप्लोर ग्याजेट च्यानल शुरु गरे। “नियमपूर्वक काम गरेकाले हाम्रो च्यानल छिट्टै भेरिफाइड पनि भयो”, उनी सुनाउँछन्।
आ–आफ्नो घरको कोठालाई नै कार्यालय बनाउने उनीहरू विभिन्न स्थानमा गई छायांकन गर्छन्। “धेरैजसो सबै सुतेपछि मध्यरातमा भिडियो खिच्छौं”, प्रभात भन्छन्।